Fandraharahana : Entina hanohanana mpandraharaha tanora ny tahiry « Miarakap » -
AccueilSongandinaFandraharahana : Entina hanohanana mpandraharaha tanora ny tahiry « Miarakap »
Fandraharahana : Entina hanohanana mpandraharaha tanora ny tahiry « Miarakap »
Voalohany eto Madagasikara. Entina hanohanana ireo mpandraharaha tanora manana tetikasa amin’ny fananganana orinasa afaka mivoatra ny « Miarakap ». Ankoatra ny famatsiam-bola dia manara-maso sy mitantana ireo orinasa madinika sy salatsalany, ary ireo orinasa vaovao afaka ny hivelatra ny « Miarakap ». Ankoatra ny famatsiam-bola anefa dia mampiasa mandray anjara amin’ny petra-bola amin’ireo orinasa manana hery ahafahana mampivoatra maharitra ny toe-karena, ny sosialy ary ny tontolo iainana ireny, ity orinasa mpamatsy vola ity.
Mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanohanana ireny orinasa ireny ny banky, nitondra ny anjara birikiny ny BNI Madagascar. ity farany izay maneho amin’izany fanohanana izany ny finiavany mandray anjara amin’ny fampandrosoana sy ny fahavitrihan’ny orinasa Malagasy, ary ny fampiroboroboana ny toe-tsaina tia fandraharahana. Efa nanehoan’ny BNI Madagascar izany ny fikarakarana isan-taona ny fifaninanana ho an’ny tanora mpandraharaha, na ny « Trophée du Jeune Entrepreneur ».